မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2018-03 > သငျသညျကို non-ယုံကြည်သူများစဉ်းစားအဖြစ်?
မယုံကြည်သူများကိုသင်ဘယ်လိုထင်မြင်သနည်း။ ငါထင်တာကငါတို့အားလုံးစဉ်းစားသင့်တဲ့မေးခွန်းပဲ! ယူအက်စ်ရှိ Prison Fellowship ကိုတည်ထောင်သူ Chuck Colson ကဤမေးခွန်းကိုတစ်ချိန်တည်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပြခဲ့သည် -“ မျက်မမြင်တစ် ဦး သည်သင်၏ခြေထောက်ပေါ်သို့တက်လျှင်သို့မဟုတ်သင်၏ရှပ်အင်္ကျီပေါ်တွင်ကော်ဖီပူပြင်းလျှင်သင်သူ့ကိုစိတ်ဆိုးမည်လော။ သူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောသည်မှာမျက်မမြင်တစ် ဦး ကသူရှေ့တွင်ရှိသောအရာကိုမမြင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်” ဟုပြန်ပြောသည်။
Bitte bedenken Sie, Menschen, die bisher nicht zum Glauben an Christus berufen wurden, können die Wahrheit vor ihren Augen nicht sehen. «Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes» (2. ကောရိန္သု 4,4). Aber genau zur rechten Zeit öffnet der Heilige Geist ihre geistlichen Augen, damit sie sehen können. «Und er (Jesus Christus) gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist» (Epheser 1,18). Die Kirchenväter nannten dieses Geschehen «das Wunder der Erleuchtung». Wenn das geschieht, wird es möglich, dass Menschen zum Glauben kommen. Sie glauben, weil sie es nun mit eigenen Augen sehen können. Obwohl sich einige Menschen, trotz sehender Augen, entscheiden, nicht zu glauben, ist es meine Überzeugung, dass die meisten von ihnen in ihrem Leben doch irgendwann positiv auf Gottes deutlichen Ruf reagieren werden. Ich bete dafür, dass sie das eher früher als später tun, damit sie bereits in dieser Zeit den Frieden und die Freude der Erkenntnis Gottes erfahren und anderen von Gott erzählen können.
မယုံကြည်သူများသည်ဘုရားသခင်နှင့် ပတ်သက်၍ မှားယွင်းသောအတွေးအခေါ်များရှိသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ဤအယူအဆအချို့သည်ခရစ်ယာန်များထံမှမကောင်းသောပုံသက်သေများ၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ အခြားသူများမှာမူနှစ်ပေါင်းများစွာကြားခဲ့ဖူးသောဘုရားသခင်အကြောင်းယုတ္တိမတန်သော၊ ဤအယူအဆမှားများသည်ဝိညာဉ်ရေးမျက်စိကွယ်မှုကို ပို၍ ဆိုးစေသည်။ သူတို့မယုံတာကိုကျွန်ုပ်တို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သလဲ။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ခရစ်ယာန်များသည်အကာအကွယ်နံရံများကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ငြင်းပယ်ခြင်းခံခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန်ကြသည်။ ဤနံရံများကိုတည်ဆောက်ရာ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်မယုံကြည်သူများသည်ယုံကြည်သူများကဲ့သို့ဘုရားသခင်အတွက်အရေးကြီးသည်ဟူသောအမှန်တရားကိုကျွန်ုပ်တို့လျစ်လျူရှုထားသည်။ ဘုရားသခင်၏သားတော်သည်ယုံကြည်သူများအတွက်သာမကလူသားအားလုံးအတွက်မြေကြီးပေါ်သို့ကြွလာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မေ့ထားကြသည်။
သခင်ယေရှုသည်ယုံကြည်သူမဟုတ်သူများကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌သင့်ကိုဝေမျှပေးသည်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ဒီလူတွေကိုသူတို့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဘုရားသခင်ကိုမသိသေးပေမဲ့လည်းသူတို့ကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပြီးရွေးနုတ်ကယ်တင်နိုင်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်မြင်ပါတယ်။ ဤရှုထောင့်ကိုသင်ထိန်းသိမ်းထားပါကမယုံကြည်သူအပေါ်ထားရှိသည့်သင်၏သဘောထားနှင့်အပြုအမူသည်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။ သင်သည်ထိုလူသားချင်းများကိုမိဘမဲ့များနှင့်ဝေးကွာသောမိသားစု ၀ င်များအနေဖြင့်သူတို့၏ဖခင်စစ်စစ်ကိုမသိသေးသူများအဖြစ်ပွေ့ဖက်လျက်လက်ခံလိမ့်မည်။ ပျောက်သောညီအစ်ကို၊ ညီအစ်မများအနေနှင့်သူတို့သည်ခရစ်တော်မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်နွှယ်ကြောင်းသူတို့သဘောမပေါက်ပါ။ ယုံကြည်သူမဟုတ်သူများသည်ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်နှင့်တွေ့ဆုံရန်ကြိုးစားပါ။ သို့မှသာသူတို့သည်လည်းဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုသူတို့၏ဘဝများ၌လက်ခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။